Tao aorinan'ny lahatsoratro politika goavambe | Martech Zone
Tao aorinan'ny lahatsoratro politika goavambe
Alarobia, Novambra 5, 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Indraindray aho mieritreritra fa ny mpamaky ny bilaogiko dia tena nahafantatra ahy nandritra ny taona maro. Omaly aho nandefa lahatsoratra bilaogy manontany raha Obama no Vista manaraka. Wow, tafio-drivotra izaitsizy re! Masiaka be ny andiana fanehoan-kevitra avy amin'ny ankavia sy ankavanana ka tsy nety namoaka ny ankamaroan'ny hevitra aho.
Ny bilaogiko dia bilaogy Marketing and Technology, fa tsy bilaogy politika. ny hatsikana iniana fanahy iniana ary tena nanararaotra ny lazan'ity fifidianana ity aho. Raha nifoha aho tamin'ity maraina ity ary hitako fa i Barack Obama no filoham-pirenena voafidintsika, mijoro eo anilan'ity birao ity aho ary tsy manantena fotsiny fa mivavaka ho an'i Obama mamonjy amin'ilay fiovana nampanantenainy. (Amin'ny maha mahaleo tena ahy, tsy dia manantena aho.)
Ho an'ireo avy ao amin'ny sisa izay nanafika ahy tamin'ilay lahatsoratra, tena mila atsaharo ny fankahalana sy ny fanafihana mahery setra amin'izay olona manontany ny mpitondra anao. Ny fahefam-panontaniana dia ampahany amin'ny fahalalahana izay niadiako sy ny olon-kafa teto amin'ity firenena ity ary adidintsika olom-pirenena amin'ny firenena malalaka ny manontany ny mpitondra sy mampamoaka azy ireo. Tena diso fanantenana aho tamin'ny fanehoan-kevitra izay nosoratana tamiko. Tsy mbola tia politika mihitsy aho ary mieritreritra fa izany indrindra no antony mahatonga antsika hanana fisaratsarahana toy izany eto amin'ity firenena ity.
Ny tena mampihomehy, mazava ho azy, dia izaho nanohana Obama tamin'ny alalàn'ny Kilonga ary efa nilaza tamin'ny zanako fa mampino andro iray eo amin'ny tantara izany raha voafidy ho filoham-pirenena izy. Taorian'ny nifidianan'i Obama an'i Biden ho filoha lefitra dia najanoko ny fanohanany.
Ho an'ireo eo amin'ny marina, fotoana tokony hijerenao lalina ny fomba nandanianao ny herinao. Rehefa nanana fotoana hitarihana ity firenena ity ianao, mitady fotoana hahitanao ny tsipika fety ary hitarika ny REHETRA ho amin'ny nofinofy amerikanina, dia nitaona an'i hubris ianao ary tsy niraharaha ireo izay tena mila anao.
Mahatsiravina ny mijery ny nataonao tamin'ny antoko Repoblikana ary ny fahavoazanao dia anao ihany. Aza omena tsiny amin'ny haino aman-jery - nanome ny vilona ho an'ireo izay niady taminao foana ianao.
Andro tsara ho an'i Amerika io
Amerikanina niavonavona foana aho, saingy androany dia andro mahafinaritra. Na inona na inona fandehan'ireo efa-taona manaraka dia dingana tsy mampino tokoa amin'ny làlana tsara hanasitranana ireo olan'ny hazakazaka izay nampisaraka ity firenena ity hatry ny ela. Tamin'ny volana nahaterahako, nisy korontana nanerana ny firenena, nosoniavina ny lalàna momba ny zon'ny olom-pirenena ary napetraka am-pialana aina i Martin Luther King.
Mampalahelo fa naharitra 40 taona, nefa mbola andro tsy mampino any Amerika. Ity no andro voalohany tao anatin'ny 40 taona ity firenena ity izay nanana hetsika lehibe nanosika ny fanavakavaham-bolon-koditra ho any amin'ny tatatra fananana. Na inona na inona sisin'ny sisin-tany misy anao dia andro mahafinaritra ho Amerikanina.
Tags: 2008barack obamaObamaara-politikabilaogy politikapolitikahaino aman-jery sosialy
I Obama ve no Vista manaraka?
Faminaniana ny taona 2009: ny fikarohana sy ny finday no ho avy
5 Nov 2008 amin'ny 9:46 maraina
Manaiky aho, misaotra tamin'ny lahatsoratra tohiny. Tsy nanohana an'i Obama aho ary tsy nifidy azy. Heveriko fa nitondra zavatra lehibe maro ho an'ny Kongresy izy ary karazan'olona tiako hiditra ao anatin'ity rafitra ity, tsy nanohana azy fotsiny aho ho mpitondra ny firenena iray manontolo. Na izany aza, tsy manova ny maha filoham-pirenena azy izao ary tompon'andraikitra amin'ny fireneko izy. Manantena ihany koa aho fa afaka manatanteraka ny fanovana izay nanaovany fampielezan-kevitra nandritra izany rehetra izany. Saingy, toa anao, tsy dia manantena aho fa hovitaina amin'ny fampanantenan'ny mpanao politika amin'ny lafiny roa.
5 Nov 2008 tamin'ny 3:18 PM
5 Nov 2008 tamin'ny 5:41 PM
FWIW, nankafiziko fatratra ny lahatsoratr'i Obama-Vista ary tsapako fa mahafatifaty sy malefaka ny fampitahana. Izaho aza nametraka azy tao amin'ny Twitter.
Mila maivana ny olona ary miala amin'ny kabary rehetra momba ny fifidianana. Adihevitra ny fifidianana. Mifaninana ny fifaninanana ary indraindray dia manasongadina ny lesoka sy ny tsy fitovian'ny kandidà. Misy fomba bebe kokoa mampifamatotra antsika kokoa noho ny mampisaraka antsika. Miaraka amin'izany isika rehetra. Andriamatoa Obama dia REHETRA ao amin'ny filoham-pirenena voafidy amerikana izao fa tsy ny demokraty fotsiny.
Andao isika rehetra handroso miaraka amin'ny hafainganan'Andriamanitra ary hamaha ny olantsika.
5 Nov 2008 tamin'ny 5:43 PM
7 Nov 2008 tamin'ny 5:47 PM
Doug, ireo fanafihana mahery vaika avy amin'ny ankavia dia fiankinan-doha nianaranao avy any ankavanana. Sambany teo amin'ny fiainako efa lehibe aho dia nirehareha ho Amerikanina ary reharehan'ny fireneko. Tonga ny fotoana hiarahantsika mivory ho firenena ho an'ny tombontsoa iraisana, toekarena, angovo, hitondra ny tafika, hanome fanantenana ny ambanilanitra, ary hivavaka mba hiakatra ho hery mitambatra ao ambadiky ny fitarihantsika isika rehetra. Manantena aho fa ny zanatsika dia maniry ny hitovy amin'i Barack fa tsy toa an'i Mike na 50 cent. Raha lasa laharam-pahamehana ho an'ny tanoran'i Amerika ny fanabeazana noho ny fifidianana Obama dia ho antony lehibe izany. Any amin'ny tanàn-dehibe amerikana sasany dia manana taham-pivoahana mainty maherin'ny 75% isika, mamela ny fanantenana ho velona. Doug jereo ny lahatsoratro, tonga ny fotoantsika http://www.blackinbusiness.org